जनकपुर-जयनगर रेलमार्ग सञ्चालनको तयारी | Himalaya Post
Posted by Himalaya Post | ५ असार २०७७, शुक्रबार १७:५८ |
जनकपुर – बन्दाबन्दीले अन्तिम चौमासिकमा सबै पूर्वाधार निर्माणलाई बाधा पुर्‍याए पनि रेलमार्ग निर्माण लक्ष्यभन्दा बढी सम्पन्न भएको छ । चालू आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६० किमी रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म झण्डै ६२ किमी सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ ।
कुर्था–जयनगर रेलमार्गअन्तर्गत जनकपुर–बिजुरापुरा खण्ड, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र विराटनगर–बथनाहा रेलमार्गका विभिन्न खण्डमा निर्माण जारी रहेको विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए । कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले बन्दाबन्दी जारी राखे पनि विभागले निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ । विभागले रेलमार्ग निर्माणलाई बन्दाबन्दीको समयमा समेत जारी राखेको छ । उनले भने, “बन्दाबन्दीका कारण केही दिन रोकिए पनि त्यसपछि काम भइरहेको छ ।”
विभागका अनुसार जनकपुर–विजुरापुरा खण्डमा रेल्वे ट्र्याकको काम भइरहेको छ । जयनगर–जनकपुर सम्पन्न भएर सञ्चालनको तयारी हुँदा जनकपुरबाट बिजुरापुरासम्मको ट्र्याक निर्माण भइरहेको छ । जनकपुर–जयनगर रेलमार्ग सञ्चालनको तयारी भइरहेको जनाइएको छ । यसका लागि रेल्वे कम्पनीमार्फत रेल सञ्चालनका लागि सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन अघि बढाएको छ । दुई रेल सेट सीमा नजीकै आइसकेको उनले बताए । उनले भने, “रेल सेट आइसकेको छ अब मात्रै हामीले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ ।”
राष्ट्रिय गौरवको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा अध्ययन तथा मुआब्जा वितरणसँगै रेलमार्ग निर्माणको भइरहेको उनले जानकारी दिए । विभिन्न स्थानमा पुल निर्माणको काम भइरहेको छ । सो रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिवासमा पुल निर्माण भइरहेको छ । कांकडभिट्टा इनरुवा खण्डमा आगामी आवमा ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण अघि बढाइनेछ । रेलमार्गका कतिपय स्थानमा मुआब्जा बाँड्ने काम बाँकी छ । बर्दिवासलगायत जिल्लामा मुआब्जा बाँकी छ । उनले भने, “आगामी वर्ष थप काम अघि बढ्नेछ ।”
Previousछिट्टै सकिने भो रानीपोखरी पुनःनिर्माण
Nextकाठमाडौँ उपत्यकामा जोर विजोर नियममा थप कडाई
राजधानीमा बालक अपहरणको ४५ मिनेटभित्रै हत्या !
१४ मंसिर २०७५, शुक्रबार ०६:५०
दरबारमार्ग सामूहिक बलात्कार प्रकरणस् डीएसपीसहित तीन प्रहरी कारबाहीमा
१८ माघ २०७४, बिहीबार ०९:२२
बुद्ध एयरले आजदेखि भरतपुर–पोखरा उडान शुरु गर्दै, कती छ भाडा ?
३० भाद्र २०७४, शुक्रबार ०७:१९